Miarahaba. Izay no azo atao mba hihaona ny lehilahy iray any Dubai ho an'ny fifandraisana matotra ho an'ny tokan-tena ny vehivavy. Aho miaina ao Dubai dimy volana efa ka mahatsiaro ho irery. Fa tsy manana hevitra ny fomba mety hihaona olona eto. Aho telo-polo ianao, te-hihaona Eoropeana ny olona. Manontany Ahy Fifadian-Kanina
Miarahaba. Izay no azo atao mba hihaona ny lehilahy iray any Dubai ho an’ny fifandraisana matotra ho an’ny tokan-tena ny vehivavy. Aho miaina ao Dubai dimy volana efa ka mahatsiaro ho irery. Fa tsy manana hevitra ny fomba mety hihaona olona eto. Aho telo-polo ianao, te-hihaona Eoropeana ny olona. Manontany Ahy Fifadian-Kanina
Aho miaina ao Dubai dimy volana efa ka mahatsiaro ho irery. Fa tsy manana hevitra ny fomba mety hihaona olona eto. Aho telo-polo ianao, te-hihaona Eoropeana ny olona. Miarahaba, tena mino izany mandra-pahoviana ny fifandraisana no nitranga tao, ohatra, ianao, dia tsy hitondra an-trano ny bf gr fotsiny taorian’ny efatra andro loza. Tsy mila ny mahita ny olona ho anareo, satria marina ny fotoana ho avy ho anao sy ny azy fa noho ny mandritra izany fotoana izany, mieritreritra aho fa tokony hiresaka amin’ny olona. Raha toa ianao ka azo antoka dia atao, efa nanao izany ny andro na ny andro manaraka. Raha tsy azonao antoka ianao dia vita ho amin’ny fifandraisana, dia w. Miarahaba tena mino izany mandra-pahoviana ny fifandraisana no nitranga tao, ohatra, ianao, dia tsy hitondra an-trano ny bf gr fotsiny taorian’ny andro efatra tsy ianao, dia miandry sy mahita izay mitana avy voalohany angamba ny telo volana voalohany avy eo dia hanova ny sata mahazo aina sy azo antoka, satria afaka manova ny sata ankehitriny ary tampoka teo, ny zavatra mitranga dia mila manova azy io indray, ka ny toro-hevitra dia ny miandry farafahakeliny telo volana, manantena manampy. Tsy mila ny mahita ny olona ho anareo, satria marina ny fotoana ho avy ho anao sy ny azy fa izay fotoana izay heveriko fa tokony hiresaka amin’ny olona tsy misy ahiahy aho satria mihevitra izy ireo dia menatra anao satria azo atao fa tsy misy olona manatona anao raha mijery tsara sy manokana y tsara fanahy toy izany fotsiny ho op den ho azy ireo. Raha toa ianao ka azo antoka dia atao, efa nanao izany ny andro na ny andro manaraka. Raha tsy azonao antoka ianao dia vita ho amin’ny fifandraisana, izaho dia miandry, satria tsy mila ny olona mahalala anao nisaraka ary avy eo dia tonga indray miaraka. Ny olona dia afaka ny ho toy izany koa hitsara. Tokony hiova izany avy hatrany toy izao, inona no fotoana ho ao amin’ny fifandraisana raha ianao handeha handao ny fiarahana amin’ny aterineto misokatra, dia te olona mikapoka ny gf bf tsy, — tsara tao amin’ny Facebook raha mbola toy ny tokan-tena ny olona no mihevitra izany, ary dia manao zavatra eo izay. Mampiasa ny fifandraisana ara-tsosialy ao amin’ny aterineto na ivelan’ny aterineto. Hihaona ny namana be dia be izay izy ireo dia mifandray amin’ny ny sasany nanan-karena ny Arabo. Mandeha mitsidika ny toerana izay misy ny mpanankarena matetika ry zalahy mandehandeha, milaza, trano fisotroana, spas, salon, ny golf clubs sy ny sisa.
Mirary anao ho tsara vintana. angamba misy dia eo am-piandrasana ny fifandraisana sata fangatahana avy na ianareo roa tamin’ny lasa fa mbola tsy nisy niraharaha. Isaky ny ankizilahy sy miezaka aho mba handefa samy hafa ny fifandraisana fangatahana izany dia milaza amintsika ny hafa mpampiasa amin’ny fifandraisana, fa hoy no tokan-tena eo ô. Raha mbola manana gf afaka manova ny sata ao amin’ny kaonty fb fa ao amin’ny nentim-paharazana, ireo niandry telo volana alohan’ny niditra tao dia ny fifandraisana vaovao. Ny toerana tsara indrindra mba hihaona ny ankizivavy kiraro toeram-pivarotana, fikambanana famakiam-boky, trano fisotroana kafe, ary ny tora-pasika malaza toy ny fanangonana antony ho an’ny vehivavy. Izany rehetra izany dia miankina amin’ny Zazavavy Bandy tena, manontany azy ireo raha toa ka ny fifandraisana dia ny zava-miafina, na raha tsy izany ny zava-miafina misy ny valiny raha toa tsy dia mandeha tsara mialoha. Aho miaina ao Dubai dimy volana efa ka mahatsiaro ho irery. Fa tsy manana hevitra ny fomba mety hihaona olona eto. Aho telo-polo ianao, te-hihaona Eoropeana ny olona. Hitako fa ny sipa nivoaka tao amin’ny firenena, mba hihaona ny vehivavy dia nihaona tao amin’ny tsipika.
Tiako ny fony indray ho ahy
inona no ataoko? Mba ampio aho azafady? Misy miseho ho ny vehivavy tsara tarehy izay nisongadina teo fa hametraka fanontaniana, fa izy lasa nandeha. fantatrao ve raha izy no iray? Tiako mba hatao.
Efa ela-distance fifandraisana
nahazo indray izahay miara-rehefa afaka iray volana ny maha-tokan-tena, tsy miresaka betsaka araka izay ampiasaintsika. inona no tokony hataoko? Mila ny fanampianareo izahay. Mba hanampiana antsika hanatsara ny votoaty amin’ny alalan’ny fanesorana ireo fanontaniana izay dia zava-dehibe toy izany koa sy ny nampitambatra azy ho any io fanontaniana io. Masìna ianao, lazao aminay izay fanontaniana eto ambany dia mitovy toy ity iray ity: na oviana na oviana ny olon-tiany aho ary miezaka alefaso samy hafa ny fifandraisana fangatahana izany dia milaza amintsika ny hafa mpampiasa amin’ny fifandraisana, fa hoy no tokan-tena eo ô. I Daniel dia iray amin’ny chat mpandrindra amin’ny Hanontany Ahy ny Fifadian-kanina. Daniel mifanaraka ny fangatahana miaraka amin’ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ny manam-pahaizana. I Daniel dia tratra ‘Gold’ ny haavon’ny toerana, ny avo indrindra ankapobeny izay azo atao. I Daniel dia manana feedback tsara note
← Ny fomba Hilaza Raha ny Arabo Bandy Tia Anao Tsiroaroa ny Fiainana
Arabo Lahatsary Amin'ny Chat Room →